Faahfaahin Laga Helayo Saraakiil Ku Dhimatay Shil Gaari. – Bogga Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Saraakiil Ku Dhimatay Shil Gaari.
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Berbera iyo Hargeysa.
Shilkan gaari ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari ay la socdeen saraakiil ciidan iyo gaari ay leedahay shirkad ka howlgasha dhulka uu ka arimiyo maamul gobaleedka gaala raaca ah ee isku magacaabay Somaliland.
Saraakiil ka tirsan maamulka uu hogaamiya Murtad Muuse Biixi ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in shilkaasi ay ku dhinteen Labo sarkaal kuwaasi oo kala ah Korneyl Cabdi Wali Cabdi Llaahi Warfaa oo ahaa taliyaha hogaanka tababarka ee maleeshiyaatka ilaalada xeebaha gobalada uu ka arimiyo maamulka Biixi iyo Axmed Caseyr oo ahaa sarkaal si aad ah ula shaqeynayay maamulkaasi gaala raaca ah.
Inta badan wadooyinka isku xirta degmooyinka iyo deegaanada uu ka arimiyo maamul gobaleedka u adeega dowlada Xabashida Itoobiya ee isku magacaabay Somaliland waxaa inta badan ka dhacay shilal gaari oo sababa khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed.